Midhiya Kuonekwa - Sekuonekwa paTV - NBC, CBS, FX
MaWiricheya edu akaverengerwa muBig Budget Mafirimu & Terevhizheni Shows
LOGAN: XMEN Firimu
Logan ndeye 2017 American superhero firimu ine Marvel Comics hunhu Wolverine, inoridzwa naHugh Jackman. Iyi firimu, yakaparadzirwa ne20th Century Fox, chikamu chegumi mune X-Men firimu nhepfenyuro, pamwe neyechitatu uye yekupedzisira Wolverine firimu, ichitevera X-Men Mavambo: Wolverine (2009) uye The Wolverine (2013).
Inotungamirwa naJames Mangold, uyo akanyora kunyora screenplay naScott Frank naMichael Green, kubva munyaya yaMangold, uye zvakare nyeredzi Patrick Stewart, Richard E. Grant, Boyd Holbrook, Stephen Merchant naDafne Keen. Iyi firimu inotevera yapfuura-yake-yekutanga Logan kutanga rwendo rwenzira kuyambuka dystopian ramangwana America kune rimwe basa rekupedzisira.
NCIS TV RATIDZA
NCIS muAmerican chiito chemapurisa maitiro enhepfenyuro yeterevhizheni, achitenderera nechikwata chekunyepedzera chevamiriri vanobva kuNaval Criminal Investigative Service, iyo inoongorora mhosva dzinosanganisira US Navy neMarine Corps.
Pfungwa uye vatambi zvakatanga kuunzwa muzvikamu zviviri zveiyo CBS akateedzana JAG (mwaka misere zvikamu 20 uye 21: "Ice Queen" uye "Meltdown"). Iyo showa, yakasununguka kubva kuJAG, yakatanga musi waGunyana 23, 2003, paCBS. Kusvika pari zvino yave nhepfenyuro yegumi nematatu yakazara mwaka uye yapinda mukushambadzira syndication kuUSA Network neCloo.
Donald P. Bellisario naDon McGill ndivo-vagadziri uye vagadziri vakuru venhengo yekutanga yeiyo NCIS franchise. Ndiyo yechipiri yakareba-yakamhanyisa yakanyorwa, isina-hupenyu US yekutanga nguva yeTV irikuridza, ichipfuura chete neMutemo & Order: Yakakosha Yevanokuvadza Unit (1999-iripo), uye ndiyo yegumi neshanu-refu-inomhanyisa yakanyorwa US yekutanga nguva TV akateedzana.
Dr. Phil TV RATIDZA
Dr. Phil ndeyekuAmerican hurukuro yekuratidzira inotungamirwa naPhil McGraw. Mushure mekubudirira kwaMcGraw nezvikamu zvake paOprah Winfrey Show, Dr. Phil akabuda musi waGunyana 16, 2002. Pane zvese zviratidzwa McGraw anopa mazano nenzira ye "nzira dzehupenyu" kubva pahupenyu hwake sechiremba uye wezvepfungwa.
Iyo showa iri mubatanidzwa muUnited States uye nedzimwe nyika. Mwaka wayo wegumi wakatanga kuratidzwa munaGunyana 12, 2011. Dzimwe nguva nguva dzehunyanzvi dzakaburitswa paCBS. Chirongwa ichi chakasarudzirwa Mubairo Wamasikati Emmy Mubairo gore rega kubva 2004.
SUPERSTORE TV RATIDZA
Superstore ndeyeAmerican single-kamera sitcom terevhizheni nhepfenyuro iyo yakatanga paNBC munaNovember 30, 2015. Iyo nhepfenyuro yakagadzirwa naJustin Spitzer, uyo anoshandawo semugadziri mukuru.
Starring America Ferrera (uyo anoshandawo semugadziri) naBen Feldman, Superstore anotevera boka revashandi vanoshanda pa "Cloud 9", chitoro nhamba 1217, inofungidzira hombe-bhokisi chitoro muSt. Louis, Missouri. Iyo ensemble uye inotsigira cast inoratidzira Lauren Ash, Colton Dunn, Nico Santos, Nichole Bloom, naMark McKinney.
Jurassic Nyika: Fallen Kingdom MOVIE
NETWORK: Universal Mifananidzo
Jurassic World: Fallen Kingdom ndiyo yechishanu uye ichangoburwa chikamu muJurassic Park firimu nhevedzano.
Yakaburitswa muna 2018, iyo firimu inotungamirwa naJA Bayona uye nyeredzi Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, naJeff Goldblum. Iyi firimu ndiyo inotevera inotevera 2015 blockbuster, Jurassic World (yakagoverwa neUnivers Pictures, dir. Colin Trevorrow).
Iyi firimu inogadzirirwa makore matatu mushure mekudonha kweJurassic World Theme Park. Owen Grady (Pratt) naClaire Dearing (Howard) vanodzokera kuchitsuwa chekunyepedzera Isla Nublar kunoponesa ma dinosaurs akasara kubva mugomo rave kuda kuputika nekuparadza chitsuwa. Nekudaro, kana vari pachitsuwa vanowana rangano rakadzama rinotyisidzira munhu wese.